Elatra akoho misy karioty voaendy, manankarena ary mora karakaraina. | Recipe ao an-dakozia
Elatra akoho nendasina nendasina
Montse Morote | 13/05/2021 09:00 | Entries mafana, Resety hena
Elatra akoho nendasina nendasina, fomba iray hafa hihinanana elatra, ho ahy ny zavatra tsara indrindra momba ny akoho. Akory ny hatsaran'ny elatra, tena malefaka sy matsiro izy ireo. Azoko antoka fa tianao koa izy ireo !!!
Azontsika atao ny manomana azy ireo amin'ny fomba maro, amin'ny saosy, endasina, voahosotra ary manome azy ireo ny tsiro izay tiantsika amin'ny fomba maro ary mba hanazavana azy ireo dia azo omanina ao anaty lafaoro izy ireo.
Mora ny manamboatra ity fomba fahandro ity, vitsy sy tsotra ny fangaro ao aminy, ny saosy curry dia omanina yaourt sy zava-manitra kari. Mety amin'ny sakafo atoandro na sakafo hariva ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Fotoana fiomanana: 40 M
Fotoana hiketrehana: 50 M
Fotoana manontolo: 1 h 30 min
Elatra 1 kilao
Yaourt misy menaka 1-2 na grika
Curry sotro fihinana 2
Kisoa na persily voatetika
Hanomanana ny elatry ny akoho amina karizy ao anaty lafaoro, hanomboka amin'ny fanadiovana ireo elatra isika, ary hampisaraka ireo elatra amponga amin'ny elatra. Nametraka sira sy dipoavatra kely izahay. Manomana ny saosy izahay, ao anaty vilia iray dia apetratsika ny yaourt, sakamalao sotrokely na persily, ampio karielà sotrokely, ilay tongolo lay namboarina. Afangaroinay tsara ny zava-drehetra.
Ampio ny elatry ny akoho ao anaty lovia miaraka amin'ny saosy voaomana, aparitaho ary afangaro tsara ireo elatra. Ampitainay amin'ny lovia fanendasana izy ireo. Avelantsika hiala sasatra mandritra ny fotoana fohy izy ireo, 30 minitra farafahakeliny.
Apetrantsika amin'ny 200ºC ny lafaoro, apetratsika amin'ny elatra voaendy ny loharano. Hodiovintsika izy ireo mba ho tsara volontany avokoa. Avelantsika mandra-pahatongan'izy ireo volamena. 40-50 minitra eo ho eo.
Rehefa izy ireo dia entintsika mivoaka ary vonona hihinana !!!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » namany » Entries mafana » Elatra akoho nendasina nendasina
Spaghetti miaraka amin'ny udika tongolo lay
Omelette fromazy sy fromazy